Federal Learning School
635/E, Yoema Yeiktha Lane, Kamayut Township
21-08-2020 04:00 PM
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနအသင်း (CDES) ကနေ ဖွင့်လှစ်တဲ့ Federal Learning School (Batch-1) ကို CDES ရုံးတွင် စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ ယခု သင်တန်း ၁၈.၈.၂၀၂၀ နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အဓိက သင်ကြားမှုများ အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နိုင်ငံရေး လက္ခဏာများ၊ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ် စနစ်ဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ နှင့် အခြေခံသဘောတရားများကို နားလည် လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးတဲ့ လေးရက်တာ သင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု သင်တန်းကို ရန်ကုန်ရှိတက္ကသိုလ်အသီးသီးက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျောင်သားသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ လူငယ်များမှ တက်ရောက် သင်ကြားလျက်ရှိပြီး သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သင်တန်းပြီးဆုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုသင်တန်းကို အစိုးရများ၏ Covid-19 ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် အညီလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာ လိုအပ်သော လက်သန့်ဆေးရည်၊ Mask များလည်း ထားရှိပေးခြင်းနှင့် အပူချိန် တိုင်းတာခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
The ‘Centre for Development and Ethnic Studies’ initiated the first batch of Federal Learning School (FLS) programme at CDES office. The learning school is4days course and was started on 18- August 2020, focusing on the characteristics, basic principles of democracy and federalism in nation-building.
The participants are from various background such as; university students, Student Union, CSOs, and some NGOs respectively.
In terms of, current Covid-19 pandemic condition, our Federal Learning School follows the government instructions by limiting participants and supporting some basic health stuff.